जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्रोत व्यक्तिहरुसँग गरेको कार्य सम्झौताको नमूना ।।।
प्रकाशित मिती: २०७१-०५-०४
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बर्दियाले २०७१/०५/०४ गते स्रोत व्यक्तिहरुसँग १४ बुँदे कार्य सम्झौता गरी विद्यालय तहमा शैक्षिक सुधार एंव साक्षर बर्दिया कार्यक्रमलाई गति दिन प्रयास गरेको छ । विस्तृत रुपमा अध्ययनका लागि कार्य सम्झौताको नमूना हेर्न सकिने छ । सबै स्रोत व्यक्तिहरुबाट यहि नमूनाको खाली ठाउँमा आफ्नो नाम र स्रोत केन्द्रको नाम लेखि हस्ताक्षर गर्ने काम भएको छ ।।।
पुस्तक समिक्षा - विद्यार्थी केन्द्रीत पढाई क्रियाकलाप ।।।
प्रकाशित मिती: २०७१-*०२-३१
बर्दिया जिल्लाका प्राय विद्यालयहरुमा साना भएपनि पुस्तकालय छन् । तर ती पुस्तकालयहरुको सिकाई प्रक्रियामा समुचित उपयोग एउटा मुद्धाको रुपमा रहेकाे छ । प्रस्तुत "पुस्तक समिक्षा" साधनले सवै तहका विद्यार्थीहरुलाई पुस्तक अध्ययनमा प्रेरित गरी पुस्तकालयको प्रभावकारी उपयोग गर्न र सिकाई अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।।।
म शिक्षक मेरो जिज्ञासा ।।।
प्रकाशित मिती: २०७१-०२-३१
सिक्न खोज्ने नै जान्ने हो । यस लेखमा एक जिज्ञासु शिक्षकका पेशाकर्मी जिज्ञासाहरुलाई उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसको अध्ययनबाट शिक्षकहरुले अाफ्नो भुमिका पहिचान गर्नुको साथै पेशाकर्मी शिक्षक बन्नका लागि अावश्यक ज्ञान तथा सिप हासिल गर्नेछन् । यो प्राप्त ज्ञानलाई अभ्यासमा ल्याएमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा समुच्च सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कार्यमुलक अनुसन्धानको नमुना ।।।
अाफ्नो पेशागत उन्नतिको लागी शिक्षकले नयाँ नयाँ सोचहरुको निर्माण गरी सिकाई प्रक्रियामा प्रगोगमा ल्याउदछन् । यसमा कार्यमुलक अनुसन्धानको एउटा नमूना प्रस्तुत गरीएको छ । यसबाट शिक्षकलाई कार्यमुलक अनुसन्धानको योजना, कार्यान्वयन र प्रतिविम्बात्मक प्रतिवेदन लेख्न सहयोग पुग्नेछ ।
अक्षर नराम्राे भएर के भाे र ! अाफना लागि अाफै नियम बनाएर काम गर्नु सराहनीय काम हाे। त्रिभुवन मा‍वि सुर्यपटुवामा कक्षा ६ का विद्यार्थीहरुले अाफै बनाएर टासेकाे नियम
अक्षर नराम्राे भएर के भाे र ! अाफना लागि अाफै नियम बनाएर काम गर्नु सराहनीय काम हाे ।